टेक कम्पनीहरुमा अन्धविश्वास, एप्पलले आईफोन '१३' पूर्णरूपमा छोड्न सक्ने ! - Technology Khabar
» टेक कम्पनीहरुमा अन्धविश्वास, एप्पलले आईफोन ‘१३’ पूर्णरूपमा छोड्न सक्ने !
आईफोन १२ र १२प्रो
एप्पलको आगामी आईफोन श्रृंखलाको नाम के हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै प्रश्नहरु छन्। यो आईफोन १३ सिरिज वा आईफोन १२ एस सिरिज हुनेछ भन्ने बारेमा विश्लेषकहरू एप्पलले ‘आईफोन १३’ लाई छोड्ने विश्वास गर्छन् । किनभने ‘१३’ नम्बरलाई धेरै पश्चिमी संस्कृतिहरूमा नराम्रो अंकको रुपमा मानिने गरिन्छ।
टेक्नोलोजी निर्माताहरूले समय-समयमा यस्तो गर्ने गर्छन्। याद गर्नुहोस् कि क्वालकमले हालै मात्र आफ्नो भर्खरको फ्ल्यागशिप चिपसेटको लागि ‘८८८’ नम्बर अपनाएको थियो, किनभने यो चीनमा भाग्यशाली संख्या हो।
हालै त्यस्ता रिपोर्टहरू आएका छन् कि एप्पलले आईफोन १३ को सट्टा ‘आईफोन १२ एस’ को लागी उपयोग गर्नेछ। यसबाहेक, स्मार्टफोनको साथमा ‘एस’ ले मूल डिजिटल संस्करणमा अपग्रेडलाई मात्र जनाउँछ। यसैले, एप्पलको अर्को प्रमुख आईफोन १२ एस हुनेछ र यो आईफोन १२ को अपग्रेड मात्र हुनेछ।
जोन प्रोसरका अनुसार टिम कुक र एप्पलका अधिकारीहरू अन्धविश्वासको कारण १३ नम्बरको साथ अलिकता असहज देखिन्छन्। अब त्यस्ता दावीहरू आएका छन् जुन उनीहरू यस बर्षको फ्ल्यागशिपलाई आईफोन १२ एस नाममा ल्याउन बाध्य हुनेछन्।
यस बाहेक कम्पनीले आईफोन १३ नाममा कुनै फोन नल्याउन सक्नेछ । यसले आईफोन १३ लाई पूर्ण रूपमा छोड्छ र अर्को साल आईफोन १४ जारी गर्दछ। सन् २०१७ मा आईफोन एक्स पछि एप्पलले मोबाइल फोनमा ‘एस’ संस्करणको प्रयोग गरेको छैन। ऐतिहासिक रूपमा, एस संस्करणले प्रायः समान आकारको प्रतिनिधित्व गर्दछ तर भित्र एउटा अपग्रेड हुन्छ। बाहिर आएका अफवाहहरूका अनुसार, आईफोन १२ एस अपग्रेड पोइन्टहरूमा १२० हर्ट्ज डिस्प्ले, नयाँ क्यामरा सीएमओएस, सानो फ्रन्ट नोच लगायतका फिचर हुनेछ।
तत्कालको अवस्थामा यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छ। आउँदो सेप्टेम्बर र अक्टुबरमा एप्पलले यो डिभाइस रिलिज गर्नु भन्दा अझै छ महिना भन्दा बढी समय छ। तर जे होस्, ‘१३’ नम्बर एप्पलको उत्पाद श्रृंखलामा अवस्थित छैन।
तर अर्को तर्फ कम्पनीले बायोनिक ए१३ प्रोसेसर ल्याईसकेको र १३ इन्चको म्याकबुक पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसकारणले पनि हाल आएका विभिन्न चर्चाहरु सहि नहुन सक्ने संभावना पनि छ । एजेन्सीहरुका साथ
बाँकी बक्यौता रकम बारे दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, १५ दिनभित्र नबुझाए कम्पनीहरु स्वतः खारेज
आइसिटी अवार्ड २०२० को ग्राण्ड फिनाले पुस ११ गते आयोजना हुँदै